Sheekada filimka Fukrey Returns: Maba laga xiiso dhigaayo filimkaan shactirada iyo jah wareerka badan – Filimside.net
Sheekada filimka Fukrey Returns: Maba laga xiiso dhigaayo filimkaan shactirada iyo jah wareerka badan
December 9, 2017 Zakarie Abdi
Kooxda Fukrey wey soo laabteen waxayna la imaadeen qaybta labaad mashruucooda shactirada iyo jah wareerka badan looguna yeerayo Fukrey Returns.
Sanadii 2013 ayuu mashruuca Fukrey soo bilaawday kaasi oo si la yaab leh ku guuleestay sidoo kalena sheekadiisa shactiro ahaan siweyn looga helay.
Inkastoo filimkaan jilaayaal awood badan hogaamiye ka ahayn hadana daawadayaasha waa ka gadmay agtooda xayeysiinta balaaran ee loo sameeyayna waxay sababtay in tiyaatarada la saaray ayadoo xiiso loo wada qabo qaybta labaad:
Jilaayaasha: Pulkit Samrat, Manjot Singh, Ali Fazal, Varun Sharma, Richa Chadha, Pankaj Tripathi, Vishakha Singh, Priya Anand
Muxuu Ku Wanaagsan Yahay Fukrey Returns: Xiisahii qaybta hore oo lasii kaabay shactiro aan dhamad laheyn, bandhiga Varun Sharma iyo filim dheeli tiran oo aad ku naqas bixi kartid.
Muxuu Ku Liitaa Fukrey Returns: Xoogaa waxyaabaha maangalka ahayn ayaa ku badan balse filim walbo shactiro iyo jah wareer waa loo dul qaataa hadii aad ku aragtid ficilo caqliga qaadan karin.
Daawo Ama Ha Daawanin Fukrey Returns: Waa hubaal in Fukrey Returns uga heli doontid daawashadiisa hadii aad qaadatid go’aan ah inaadan daawanin filimkaan waan ka xunahay waxbaa meesha kugu dhaafi doono!
Fariinta Filimka Fukrey: Filimkaan wuxuu ka bilaabanaa halkii qaybta labaad kusoo idlaatay taasi oo ahayd in Bholi Punjaban (Richa Chadha) xabsiga la dhigay halka kooxdii qayaantay Fukra gang ee ka kooban Hunny (Pulkit Samrat), Choocha (Varun Sharma), Lali (Manjot Singh) & Zafar (Ali Fazal) nolol farxad leh bartanka kaga jiraan.
Laakiin kooxda Fukrey Gang farxadooda iyo noloshooda waxaa halis ku noqoneyso gabadhii ay qayaameen Bholi Punjaban (Richa Chadha) oo hal sano kadib xabsiga kasoo baxday ayadoo siyaasi caan ah uu garab siiyay.
Bholi Punjaban (Richa Chadha) waxay dajinee qorshayaal badan oo ay dooneyso inay Fukrey gang kaga aarsuto waxayna u diidee nasiino filimkana wuxuu isku badalaa mid jah wareer shactiro iyo iskaba wareeg ah.
Kooxda Fukrey Gang waxay ku shaqeeyaan riyooyinka Choocha (Varun Sharma) markaana wuxuu usoo dajinaa qorshe ah inay dahab dhacaan laakiin dhibaatada ay la kulmaan iyo aargudashada ay ku heyso Bholi Punjaban (Richa Chadha) ayaa filimkaan loo daawan doonaa qaybihiisa dambe.
Maxaa Lag Yiri Fariinka Filimka Fukrey Returns: Inaba caadi ma ahan qoraaga filimkaan isaga ayaa ah geesiga sheekadan dadka ka gaday waana Vipul Vig wuxuuna sheekada u qoray hab aan laga caajiseyn.
Director Mrighdeep Lamba isagana sheekada si wacan ayuu isugu daba riday wuxuuna ka dhigay Fukrey Returns mashruuc aan laga xiiso dhigeyn oo shactirada iyo jah wareerka talan taalo laga dhigay.
Bandhiga Jilaayaasha: Varun Sharma iyo doorkiisa Choocha waxaa ah midka macnaha iyo nuxurka filimkaan qaatay sidii qaybta hore ayuuna qaybta labaad shactiroole Fukrey Returns ugu yahay furaha sheekada filimkaan.
Pulkit Samrat iyo Pankaj Tripathi waa laba kusoo xigaan Varun Sharma bandhig ahaana door wacan oo shactiro heer sare leh ayay ku leeyihiin Fukrey Returns.
Richa Chadha doorkeeda aargudashada iyo xumaanta waa mid xiiso leh sidii qaybta hore ayayna kaalinteeda u qaadatay weliba sida ay Varun Sharma ula jileyso ayaa kusoo jiidaneyso.
Ali Fazal iyo Manjot Singh si la yaab leh doorarkooda waa mid yar balse kuma niyad jebinayaan inta Fukrey Returns laga siiyay ayay kasoo dhalaaleen inkastoo la islahaa Ali Fazal filimkaan waqti badan ayuu ku leeyahay muuqaal ahaan.
Gunaanad: Fukrey Returns waa filim aan laga xiiso dhigeyn hubaal ahaana daawadayaasha soo dhaweyn doonaan labada todobaad ee nagu soo fool leh Fukrey ayaa tiyaatarada heesan doono ilaa Tiger Zinda Hai kasoo baxaayo.
Sidaa darteed Fukrey Returns oo sheekadiisa la siiyay 3.5/5 ayaa siweyn loogu kalsoon yahay inuu noqon doono mashruuc guul la yaab leh 2017 gaari doono hadii Hit dhameetiran noqdana culeeska ayuu Bollywood-ka dajin doonaa
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka Fukrey Returns:
Waxaa Aqrisay 992
Waa Tuma Bhagyashree Atirishada Filmka Maine Pyar Kiya Wax Ka Ogow Nolosheeda!! January 19, 2019
Dhageyso barnaamijka Filimside Friday xalqadii ugu dambeesay oo xiiso badneyd January 19, 2019
Ruug cadaagii soo rogaal celi: Suniel Shetty oo duubis ku bilaabay filimka weyn Marakkar January 19, 2019
Kooxdii Race 3: Salman, Jacqueline, Bobby, Daisy waa isku imaadeen maxaa isku keenay (+sawiro) January 19, 2019
Govinda oo banaanka soo dhigay abaal uu Salman Khan u galay 22-sano ka hor! January 19, 2019
Goormee ayuu Kevin Owens riingaha dib ugu soo laaban doonaa? January 19, 2019
Braun Strowman; waxaa shaashada gadaasheeda masuul ka ah Vince McMahon. muxuuse ka yiri hadii uu ka qeyb galaayo bandhiga Royal Rumble. January 18, 2019